आँ’खा हाम्रो श’रीरको अभिन्न अंग मानिन्छ । आँ’खाले नै हामीले संसार देख्न पाएका छौँ । आँखा बिना पुरै दुनिया अध्यारो हुने गर्दछ । त्यसैले आँखाको सुरक्षा तथा हेरचाह गर्न आवश्यक छ ।
कहिले काही हामीले स्वा’स्थ्यमा उचित हेरचाह गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव हाम्रो आँखामा पर्ने गर्दछ । जसको परिणाम हुन्छ आँखाको ज्योति कम हुनु । आँखाको ज्योति कम भएमा डाक्टरले चस्मा लगाउने सल्लाह दिने गर्दछन् । आज हामी तपाईलाई चश्मा लगाउन नपर्ने केही उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।
१. ध्यान दिनुहोस्: आफ्नो आहारा सन्तुलन राख्नुहोस् । आँखाको ज्योतिको स’मस्या हुने मान्छेले भिटामिन ए पाइने आहार खानु पर्दछ । सबैभन्दा बढी भिटामिन ए गाजरमा पाइने गर्दछ । पुरा निद्रा सुत्नुहोस्: आजभोलि समयको व्यस्तताका कारण मानिस पुरा निद्रा सुत्न पाउँदैनन् ।
तर यो आँखाका लागि निकै खराब हुने गर्दछ । त्यसैले आँखा र आफ्नो स्वा’स्थ्यका लागि भरपुर निद्रा लिन आवश्यक छ । मानिस करिब ७ देखि ८ घण्टा सुत्नु पर्दछ । यसरी सुत्दा आँखाको मां’शपेसीलाई आराम मिल्ने गर्दछ।
२ .मोबाइल र ल्याप्टपको ब्राइटनेस कम गर्नुहोस्: स्क्रीनको चर्को प्रकाशले तपाईको आँखालाई हानी पुर्याउने गर्दछ । त्यसैले तपाईले मोबाइल वा ल्याप्टप चलाउँदा ब्राइटनेस कम गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईको आँखामा रोकसान पुग्दैन् । आँखाको व्यायाम गर्नुहोस्: आँखाको व्यायामबाट पनि आँखालाई फाइदा हुने गर्दछ । आफ्नो दुबै हातलाई रगडेर तातो भएपछि हत्केलालाई आँखामा लग्नुहोस् । यसो गर्दा आँखालाई तनाव कम हुने गर्दछ ।
३. आँखा झिम्काउनुहोस्: आँखा झिम्काउनु पनि आँखाका लागि व्यायाम हुने गर्दछ । लगातार आँखाले हेरिराख्यो भने आँखामा थकान महशुस हुने गर्दछ । त्यसैले आँखालाई बिस्तारै बन्द गर्दै खोल्दै गर्नुभयो आँखालाई आराम मिल्ने गर्दछ ।
४. नियमित जाँच गराउनुहोस्: यदी आँखामा समस्या देखिएको छ भने आँखाको नियमित जाँच गराउनुहोस् । आँखा ठिक हुने व्यक्तिले पनि आँखाको नियमित जाँच गराउँदा आँखाको उपचार पनि हुन्छ र आँखा स्वस्थ पनि हुने गर्दछ ।
२०७७ फाल्गुन ४, मंगलवार ०८:१४ गते0Minutes 740 Views